Ndị na -emepụta Volvo | Ndị na -ebubata ya na China Volvo China
ezigbo ụlọ nrụpụta ụlọ nrụpụta naanị EC950RC bọket Nha nha 14727597
EC950 RC excavator ịwụ Nha nha 14727597, naanị mmepụta na Ngwuputa na -ewu ebe. Ezigbo mma na 100% jide n'aka na ndụmọdụ ahụ na ọrụ azụmaahịa. A na-eji ya na igwe mgbapụta Volvo EC950, Aili nwekwara ihe nkwụnye, pin & njigide kwekọrọ, na-enye ọrụ nkwụsị.
ezigbo ụlọ nrụpụta ụlọ ọrụ na -akwado volvo EC950 Adapter 14747598
EC950-85mm Bevel Adapter (Volvo) -14727598
EC950-100mm nkwụnye bevel-14746468
EC210 14530543 onye na -egwupụta ihe mkpuchi ịwụ na bọket emepụtara ya
Ihe nkwụnye EC210 kwụ ọtọ 14530543 Gap 40mm nnọchi Ihe nkwụnye ịwụ ihe eji arụ ụlọ, ihe nchara alloy, ịdị mma kwụsiri ike, ogologo ndụ ogologo, ntụkwasị obi ka mma.
Ntụtụ ezé excavator bọket na njigide 1455-0969 1455-0970 maka EC460
EC480TL na -adọkpụ ezé ịwụ n'ọnụ pụrụ iche na -anọchi Volvo excavator
EC480TL na -adọba ọnụ ezé ịwụ n'ọnụ pụrụ iche na -anọchi Volvo excavator, yana usoro nrụpụta ihe. Njirimara arụ ọrụ ka mma, na-eguzogide karịa na ndụ ọrụ ogologo.
14626742 1455-3244 1453-7843 EC460 EC480 excavator ịwụ ezé.
14626742 1455-3244 1453-7843 EC460 EC480 excavator ịwụ ezé sitere na Aili rụpụta, ihe nchara alloy, ịdị mma kwụsiri ike, ogologo ndụ ogologo oge, ntụkwasị obi ka mma.
EC360SYL14553243SYL ndụmọdụ ịwụ excavator site na nrụpụta Aili
EC360SYL14553243SYL ndụmọdụ ịwụ excavator site na nrụpụta Aili, ihe nchara alloy, ịdị mma kwụsiri ike, ogologo ndụ ogologo, ntụkwasị obi ka mma.
EC360 Nkume Nkume EC360RC 14553243RC eze na -egwu olulu
EC360 Nkume Nkume 14553243RC nnọchi Nrụpụta ịwụ ụlọ maka onye na -egwu ihe, ihe nchara alloy, ịdị mma kwụsiri ike, ogologo ndụ ogologo oge, ntụkwasị obi ka mma.